ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၁၅ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၁၅
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၁၅
(မိိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၂၀
ထမီနီနပ်စ်မလေးတယောက်က သူတို့ မျက်နှာတွေ ကို ဗိုင်းယပ်စ်ပိုးမကပ်နိုင်အောင် ထွင်ထားတဲ့ အကာအကွယ် လေးတခု အလွယ် လုပ်နည်း လေး အွန်လိုင်း ပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တယ်။ မပြည့်မစုံ အကြပ်အတည်းတွေကြားက တိုင်းပြည်အပေါ် သူတို့ စိတ်မပျက်ကြဘူး၊ရသလို ရုန်းကန် မရှိရှိတာနဲ့ ရှင်သန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေဟာ ချစ်စရာ မာကျော ရှင်သန် - Survival Fitness ခေါ်မလား ။ ဒီလိုပလက်စတစ်ကော်-အကြည်ပြားလေးတချပ်ကို - ၂ဖက်ကပ်တိတ်ပြားလေးနဲ့ လုပ် ထားတဲ့ မျက်နှာအကာအကွယ်ဟာ လက်တွေ့ မှာ သူတို့ မျက်နှာကို ကြာကြာကပ်ထားလို့ သိတ်အဆင်မပြေနိုင် ဘူးထင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်ဘေး ပြေးတွေ့ဘို့ ဝန်မလေးတဲ့ သူတို့ စိတ်ဓါတ်တွေသာ ဒီတိုက်ပွဲမှာ အခရာ ။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ ကိုဗစ်ကို ရင်ဆိုင်ဘို့ လက်နက် ပစ္စည်း အပြည့်အစုံ မရှိကြပါဘူး ။
ကိုဗစ် ရိုက်ချက်တွေ တနေ့တခြား ပြင်းထန် သထက်ပြင်းထန် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော်လောက်မှာ သမတကြီး ထရမ့်က ဧပြီလထဲရောက် ရင်ဖြင့် အမေရိကန် စီးပွါးရေးတွေ နလံပြန်ထအောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တယ် ။ ဒီနေ့ လက်တွေ့ အခြေအနေ က စီးပွါးရေးကို လှည့်မကြည့်နိုင်တော့ ။ ဆေးပညာရှင်တွေခန့်မှန်းတဲ့ အတိုင်း အဖိတ်အစင်တွေ အရမ်း များလာတာမို့ ဇွန်လလောက် ကျရင်တော့ နဂိုလို ပြန် ကောင်းမှာ ပါ လို့ သူ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ၃လနောက်ဆုတ် ပေးလိုက်ရပါတယ်။ လာမယ့် ရှေ့ ၂ပတ်ဟာ တိုင်းပြည်မှာ အနာကျင်ရ ဆုံး ရက်သတ္တပတ်တွေ ဖြစ်တော့မယ်လို့လဲ တခါတည်း ဝန်ခံ တယ်။ နိုင်ငံတကာကို ပန်ကြားတာ က ကျုပ်တို့ ကို မျက်နှာစည်း- လက်ပိုးသတ်ဆေးရည်က အစ အသက်ရှူစက်အဆုံး လှူနိုင်ရင် လှူကြ။ ရောင်းချင်လဲ ရောင်းကြပါ လို့ ထုတ်ဖေါ် အကူအညီတောင်းရတဲ့ အဆင့်ရောက်တယ် ။
ကိုဗစ် မှာ လိုတဲ့ ကူးစက်ကာကွယ် -PPE က မလွယ်ဘူး ။ နယူးယောက်မြို့ရဲ့ ကိုဗစ်စစ်ပွဲ ရှေ့တန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်မလေး ကိုလင်းစမစ်သ် ( Dr Colleen Smith ) က သူတို့ PPEတွေ အရမ်းသုံးရတယ် ။ သူတယောက်ထဲ မျက်နှာစည်းကို သုံးတာ အခု တရက်ကို ၁၀၀ လောက် ရှိတယ်။ ဒါကလဲ သူနဲ့ သူ့ လူနာတွေ အဓိက ဘေးကင်း လုံခြုံရေးကိစ္စ လို့ ပြောပါတယ်။ မျက်နှာစည်းအပြင် လက်အိတ် ။ မျက်လုံးအကာ ။ ကိုယ်ရုံ ။ ဖိနပ်အကာ။ လူနာ အညစ်အကျေးအိတ်။ သုံးပြီးသား အပ်နဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေ ထည့်စရာအိတ်။ လူသေထုတ်တဲ့ ၂ထပ် အိတ် ။ ( biohazard bags, N-95 masks, gloves, gowns, surgical caps, shoe covers, sharps containers, protective eyewear, hand sanitizer and Tyvek suits.) အဲသလို ကူးစက်ရောဂါ အတွက် အကာအကွယ် တကယ်လိုတာတွေက အများကြီး ။
မနေ့ တနေ့က အရှင်ဆေကိန္ဒတ ရဲ့ Quarantine စခန်းကို လာလေ့လာ တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိကြီးတယောက် ဝတ်စုံမျိုးကို ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွေမှာ သုံးခဲ့ မယ်ဆို ဘယ်လောက်များ ကျနိုင်မလဲလို့ ကိုယ်လဲ စပ်စုချင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူဝတ်လာတာလောက် မသားနားတဲ့ စျေးအသင့်အတင့် ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ဝတ်စုံ ( TYVEK Suit ) စျေးနှုန်းကို ဂူဂဲလ်ခေါက်ကြည့်တာ ၂၅ စုံပါ တထုတ်ကို ၂၀၈ပေါင် ။ . တထည်ချင်းဆို ၇ပေါင်နီးပါး ဖေါ်ပြထားတာ တွေ့တယ်။ ဒီစျေးမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဘယ်လို လုပ် တခါ သုံးကြမလဲ ။ ကိုဗစ်ချေမှုန်းရေး လက်နက်တွေ က များလွန်းစျေးကြီးလွန်းပါလား ။ ဆရာဝန် ဆရာမဝန်ထမ်းပေါင်း တထောင် တရက် သုံးမယ်ဆိုတခါသုံး မျက်နှာစည်း သိန်းဂဏန်းလိုမှာ ။ တနိုင်ငံလုံးက ဆေးရုံတွေမှာ ရှိတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ အတွက်ဆို သန်းပေါင်း ဘယ်လောက်လိုမှာပါလိမ့် ။ အမေရိကန်လို အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတောင် အလျင်မမှီလို့ သူများနိုင်ငံဆီမှာ ကူညီကြပါလို့ ဆို နေ ရင် ကျုပ်တို့ဆီ ဘယ်လိုစဥ်းစားကြမတုန်း ။ ကိုဗစ်နှိပ်စက်ပုံက အဖိုးလဲသေ -အဖေလဲမွဲ ကိစ္စမျိုးပဲ ။
အနောက်က နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်အတော်များများ ခုရက်ထဲ unprecedented scale ဆိုတဲ့ စကားကို ပါးစပ်ထဲက မချဘူး ။ ဘယ်တုန်းက မှ မကြုံဖူးတဲ့ အတိုင်းအဆပမာဏာ ပေါ့ ။ ဆေးရုံတွေကို ရောက်လာတဲ့ လူနာတွေဟာ ဆူနာမီလှိုင်းတွေ တဝုန်းဝုန်း ရိုက်နေတဲ့ အတိုင်းတဲ့ ။ နယူးယောက်မြို့ မှာ မနေ့က အလောင်းထည့်တဲ့အိတ် ၁၅၅၀အိတ်လိုပြီး ဒီနေ့ ၁၉၄၂အိတ်လိုတယ်။ ။နောက်ရက် ဒီထက်တိုးဦးမှာလို့တွက်ထားကြတယ်။ ဒီတပတ်ထဲမှာ ဆေးရုံတွေကို ထောက်ပန့်ခဲ့ရတဲ့ PPE သန်း ၃၉၀ ရှိတယ်ဆိုပါလား ။
ခုတော့ တချို့လဲ ၁၉၁၈ တုန်းက ပေါ်ဖူးတဲ့ စပိန်တုတ်ကွေးအကြောင်း ပြန်အစဖေါ်နေကြပေါ့ ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး ဖြစ်တဲ့ စပိန် တုတ်ကွေးကြောင့် လူ သန်း ၅၀ ကနေ သန်း ၁၀၀လောက်အထိ သေကြ လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြောင့် သေတာ ၁၇ သန်းပဲ ။ ခုလဲ အဲဒီတုန်းကလို ဖိတ်စင်နိုင် နေမှာလား ။ စပိန်တုတ်ကွေးတုန်းက လဲ ဆေးမရှိ တော့ အဓိက ကာကွယ်ရေး ကိရိယာ က မျက်နှာစွပ် နှာခေါင်းစွပ် ကို အားကိုးခဲ့ကြရတယ် ။အရင်လတုန်းက မျက်နှာဖုံးစွပ်စရာ မလိုပါဘူးလို့ ဆရာဝန် တချို့ ပြောနေကြရာကနေ အခုအာရှမှာ အသေနဲနေတာ မျက်နှာစည်းအကာအကွယ်တွေနဲ့နေကြ လို့ ။ ကြည့်လေ ထိုင်ဝမ် ၊ကိုရီးယား ၊ စင်္ကာပူ၊ တရုတ်တို့မှာ ကူးစက်တာနဲ အဖိတ်အစင်နဲတယ်။ သွားလေရာရာ မျက်နှာစည်းထားလို့ဖြစ်ရမယ်။ ကိုဗစ် မှာ ရောဂါ လက္ခဏာ မပြပဲ ပိုးသယ်နေတဲ့ လူတွေ ရှိနေနိုင်တယ်။ သူတို့က မျက်နှာမစည်းပဲ လျှောက်သွားနေလို့ သာ အခု အမေရိကန်မှာ ကူးစက်ခံရတာ အရမ်းများလာတာ ။ လူတိုင်းရောဂါဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာကို စည်းထားဖုံးထားဘို့ လိုမယ်လို့ အမေရိကန် ဆရာဝန်တချို့ တိုက်တွန်းလာကြပြန်ပါရော ။
သမတကြီးထရမ့်က ငါတို့ ဆီမှာ ကူးစက်ခံရတာများတယ်၊ ပေါ့စတစ်တွေ များနေတယ်ဆိုတာက ငါတို့က များများစစ်နေ လို့ များများတွေ့နေတာပါကွာ . တရုတ်က သူတို့ဆီ ဘယ်လောက် များများစစ်နိုင်လို့လဲ (တကယ်သာ များများစစ်လိုက်ရင် ငါတို့လို အများကြီးတွေ့မှာပေါ့ ) များများမစစ်နိုင်လို့ အတွေ့နဲတဲ့ သဘော သမတကြီးက တုန့်ပြန်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စာရင်းဖျောက်လို့ မရတာကတော့ ခု သုံးနေရတဲ့ အလောင်းထည့် အိတ် အရေအတွက်ပါ။
တရုတ်ပြည် သေနှုန်းကို အပြီးကျော်တက်သွားပြီး ဒီနေ့တရက်ထဲ အမေရိကန်မှာ ဖိတ်စင်သူက ၁၉၄၂ ယောက်တဲ့ ။များလှပေါ့ ။ .
အီတလီ အဖိတ်အစင်က ဒီနေ့ ၇၂၇ ယောက် ။ အသက်ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်စုစုပေါင်းက ၆၆ ယောက်ရှိသွားပါပြီ ။ အင်္ဂလန် အဖိတ်အစင်က တရက်တည်း ၅၆၃ယောက် ။ ဆရာဝန် ၄ဦး အသက်စွန့်သွား( အားလုံး မူဆလင် ) ။ အင်္ဂလန်မှာ လူပေါင်း ၁၅၂၉၇၉ စစ်-ရောဂါတွေ့သူ ၂၉၄၉၄။ လကုန်ရင် တရက် ၂၅၀၀၀ စစ်နိုင်မယ်။
မြန်မာကျော် များကလဲ သမတကြီးထရမ့်လေသံနဲ့ တူတယ်။ ငါတို့ဆီက သိတ်မစစ်နိုင်လို့ပါကွာ ။ စစ်လိုက် ရင် ပေါ့စတစ်တွေ တပုံကြီးတွေ့မှာလို့ ပြောနေတာ ဖတ်ရ တယ်။
ကိုဗစ်ကြောင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက တခါမှ ပွဲ မပျက်ဖူးတဲ့ ဝင်ဘယ်လ်ဒန် တင်းနစ်ပွဲလဲ ပျက်တယ်။ ဂလတ်စတန် ဘူရီ ဂီတပွဲတော်ကြီးလဲ ပျက်တယ်။ ဧပြီလကနေ ဇူလိုင်လအထိ က ပန်းစိုက်ရာသီ။ ဗြိတိန်လူမျိုး ၂၃သန်းက ပန်းစိုက်တယ်။ အခု ပန်းခြံတွေပိတ်။ လူတွေ အပြင်မထွက်ရ။ ပန်းစိုက်ချိန်မရတော့ ဥယျာဥ်ခြံ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ အသက်မွေးတဲ့ လူတွေ ဒီနွေမှာ ဘာမှ မရောင်းရလို့ ဆုံးရှံးရတဲ့ ပန်းပင်ပျိုးပင်တန်ဖိုးက ၁.၄ ဘီလီယံ ရှိသတဲ့ ။
ပျက်စီးချိန်တန်ရင် ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာ ဓမ္မသဘောပါပဲ ။ အီးယူကထွက်ဖို့ ဗြိတိန်က ထွက်ခ ဘီလီယံ ၅၀လောက် ပေးရမယ် ဆိုတော့ တချို့ အင်္ဂလိပ်တွေ မပေးချင်ကြဘူး။ ခုတော့ အီးယူက ထွက်မယ့်ကိစ္စလဲ မပြောအားနိုင် ကြ။ တိုင်းပြည်ကို သော့ခတ်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရ လို့ ပြည်သူကို ကျွေးထား ရမယ့် ကုန်ကျစားရိတ် ဘီလီယံ ၃၃၀လောက် ဖြစ်နေပါရော့လား ။
ဒီနေ့ဆို ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ကိုဗစ်ကြောင့် အခန်းအောင်းနေရတာ တပတ်ပြည့်တော့မယ် ။ ရောဂါလက္ခဏာ အရ တပတ်ကနေ ၁၂ အထိ သည်းထန်တတ်တယ်ပြောထားတော့ စိတ်ပူနေမိတယ်။ နေကောင်းရဲ့လား။ အရင်အပတ်တွေတုန်း ကလဲ ပုဒ်ရဟန်းမင်းကြီးနေမကောင်းဘူး။ စစ်တာ ပေါ့စတစ်ဖြစ်တယ်။ ထုတ်မပြောတာ ။ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးလဲ နေမကောင်းဖြစ်တယ် ။ ပေါ့စတစစ်ဖြစ်တယ် ကောလဟလတွေ များ ။ လူတွေသဘာဝထင်ပါ့ ။ ဒီနေ့လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်း ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်း ကူးစက်ခံရတယ် လို့ ကောလဟလဖြစ်တာကို မဟုတ်ကြောင်း ပြန်ရှင်းတာ တွေ့မိတယ်။
သုတေသန သေချာ မလုပ်ရသေးလို့ မသေချာပေမယ့် စဥ်းစားချက်တခုက ငယ်တုန်းမှာ ဘီစီဂျီ ( အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ) ထိုးထားတဲ့ သူဆိုရင် ကိုဗစ် ကို ခုခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအား အထိုက်အလျောက် ရနိုင်တယ်လို့ မှန်းကြတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် သေနှုန်းယှဥ်တဲ့ အခါမှာ ဘီစီဂျီ ဆေးမထိုးတဲ့ အမေရိကန် အီတလီ နယ်သာလန်တို့ဆီက သေနှုန်းက ဘီစီဂျီ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ ဂျပန်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသားတွေထက် သေနှုန်းများနေလို့ ဘီစီဂျီဆေးတန်ခိုးများလားလို့ တွေးဆနေတဲ့ ဆေးပညာရှင်များရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဖြစ်လာရင် ဘီစီဂျီတန်ခိုးကြောင့် အထိုက်အလျောက် အကာအကွယ် ရနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့် တွက်ဆသူများလဲ ရှိနေ။
တပ်မတော်က ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘုရင့်နောင် စစ်ကြောရေးစခန်းကို သီးခြားစောင့်ကြည့် လူနာစခန်းတခု အဖြစ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အကြောင်း ။
ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ ဒေါက်တာ ခိုင်မာဇော်နဲ့ ဒေါက်တာ သစ္စာ ထက်ထက်ထူးတို့ က မိမိဆန္ဒအလျောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်လို့ လျှောက်ကြတဲ့ အကြောင်း
ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် AYA SOMPO အာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် က ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရန်ပုံငွေ ငွေကျပ်သိန်း (၅,၀၀၀) တိတိကို မတည် ။ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးက ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနေရေးထိုင်ရေးအတွက် AYA BANK သင်တန်းကျောင်းမှာနေခွင့်ပေး
နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတဲ့ အချက် တခုက ဖေ့စ်ဘုတ် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စတင်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်း။ ဒေါ်စုရဲ့ ပထမဆုံး စာမျက်နှာမှာ လူထုနဲ့ အမြန်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ဘို့ လိုအပ်လို့ ဖေ့စ်ဘုတ် သုံးရတဲ့ အကြောင်းကို အခုလို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Facebook ကိုသုံးဖို့ဆန္ဒလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ COVID-19 စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့သုံးလိုက်ပါတယ်။
( ခုထိ လိုက် ၄သိန်း နီးပါး- ကွန်မင့်ပေါင်း ၆သောင်း ရှစ်ထောင်- ရှယ်ယာပေါင်း ၆သောင်း ၇ထောင် တက်နေတယ်။ )
ခွန်ဆိုင်း ( ၁-၀၄- ၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုုုုုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၁၅ Reviewed by MoeMaKa on 10:00 AM Rating: 5